Indlwana enethala nengadi - I-Airbnb
Indlwana enethala nengadi
Banastón Usana , Aragon, i-Spain
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Jayne
Indlwana enamakamelo okulala angu-2 edolobhaneni kusukela nge-17th Century. Ukubukeka okuhle kwechibi le-Mediano, ama-sunsets ahlaba umxhwele, ithala nengadi ukuze ujabulele ukuba ngaphandle. Ama-2kms kuphela ukusuka e-Ainsa edolobhaneni elithulile lase-Banastón Usana.
Le ndlwana enhle imi edolobhaneni lase-Banastón Usana, amakhilomitha angu-2 kuphela ukusuka e-Ainsa. Ukungena endlini kusemgwaqweni ohlanganisiwe we-Santa Agueda, omude kakhulu esifundeni esidume ngemigwaqo yaso emboziwe.
Indawo yaphansi iyikhaya legumbi lokuphumula/ikhishi eline-fireplace kanye nethala, lapho kungenzeka khona ukucabanga ngama-sunsets amahle kakhulu kanye nokubukeka okuhle kwechibi le-Mediano. Indawo yaphansi inekamelo futhi iholela engadini. Ikamelo lokulala elilodwa elilala abantu ababili, ikamelo lokulala elilodwa elilala abantu ababili negumbi lokugezela litholakala esitezi esiphezulu.
Ukuhlobisa kwangaphakathi kugqamile futhi kunomoya omuhle kakhulu, kunamathayili ahlaba umxhwele we-ceramic, amalambu wepulangwe aveziwe, nezindonga ezipendiwe kwi-ochre efudumele.
Yize kunjalo, idolobhana elithulile linama-2kms kuphela ukusuka e-Ainsa emaphethelweni ukuya e- Ordesa National Park nase-Posets-Maladeta nase-Sierra de Guara Natural Parks.
Umnikazi uhlala eduze.
Inombolo yepholisi: AT-HU-1111
Hlola ezinye izinketho ezise- Banastón Usana namaphethelo